Tag: Indianapolis kpakpando | Martech Zone
Tag: Indianapolis kpakpando
Fraịdee, June 15, 2007 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Offọdụ n'ime unu maara nzụlite m ghọtara na m rụrụ ọrụ na Industrylọ Ọrụ Mgbasa Ozi ruo ihe karịrị afọ iri. Offọdụ n'ime ihe ndị m rụzuru bụ na ụlọ ọrụ ahụ, ma ndị ọkachamara ma na teknụzụ. Ọ na-ewute m n'ezie na akwụkwọ akụkọ na-ada… mana echeghị m na ọ bụ ọnwụ, ọ bụ igbu onwe n'ezie. Akwụkwọ akụkọ na-ele anya dịka ọkwa ọkwa na-aga eBay na Craigslist. N'ụzọ mpako, ha echeghị iwere ụfọdụ n'ime uru ha ma tinye ego na ntanetị n'ịntanetị